Diyaarad sida Maxaabiis oo goor dhaw ka soo degaysa Muqdisho – Radio Muqdisho
Muddo sanado ah oo uu ku xirnaa xabsi kuyaala Dalka Itoobiya kadib ayaa Wariye Maxamed Aweys Muudey (Boqorka Bartamaha) waxaa laga soo daayey xabsi ku yaalla dalka Itoobiya,iyadoo lagu wado in laga soo dejiyo Wariye Muudey Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Waxaa kusugan garoonka diyaaradaha Muqdisho mas’uuliyiin katirsan Dowladda Soomaaliya,iyo suxufiyiin,kuwaasi oo qaban qaabinaya soo dhaweynta wariyahaasi.
Mar uu la hadlaya warbaahinta ayuu sheegay in uu ku faraxsanyahay in uu xoriyadiisa dib u helo, maadaama muddo badan uu ku xirnaa dalka Itoobiya,iyadoo sii deyntiisa ay ku timid dadaal ay sameysay Dowladda Soomaaliya.
Dhanka kale waxaa lagu wadaa in maanta ay Muqdisho soo gaaraan qeybtii 2-aad maxaabiis ku xirnayd Jaziiradda Seychelles ,kuwaasi oo dhawaan xoriyadooda dib u heley.
Dhawaan waxaa soo gaarey magaalada Muqdisho ilaa 7 kamid ah maxaabiistaasi,kuwaasi oo laga soo daayay xabiyo kuyaala Dalkaasi Seychelles.